Akwụkwọ Jamil Velji na Martech Zone |
Edemede site na Jamil Velji
Jamil bụ onye isi nke Mfe akpaaka na-ere ahịa, Saleslọ Ọrụ Na-ere Arụ Ọrụ. Omuma ya na ahia ahia, ntanye ndi mmadu, ochichi ndu na ire ahia na ahia ahia na-aghota ihe omuma, uzo di nkpa iji nweta ahia site na ulo! Jamil nwere ahụmịhe afọ 9 + dịka onye ndu azụmaahịa kachasị elu na mba ụwa. E gosipụtara ndị ahịa ya na akụkọ mmeri ha na Forbes, BBC, Tech Crunch na Venture Beat.
Ọnọdụ ahịa ahịa site na Hel - Tọn Na-eduga, Ma Enweghị Ahịa
Monday, December 12, 2016 Jamil Velji
Agbanyeghi inwe ezigbo ndu nke ndu abụrụla ihe dị ukwuu maka azụmaahịa ọ bụla, ọ gaghị eweta nri na efere ahụ. Ga-enwe obi ụtọ karị ma ọ bụrụ na ire ere gị ga-adaba na akụkọ Google Analytics gị dị egwu. N'okwu a, ọ dịkarịa ala akụkụ nke ndị a na-eduga kwesịrị ịbụ ndị ahịa na ndị ahịa. Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-enweta tọn ndu, mana ọ nweghị ahịa? Kedu ihe ị na-emeghị nke ọma, gịnịkwa ka ị ga-eme